कुखुरिको बुढो सार्है स्मार्ट रहेछ, जंड्या लोग्नेलाई त पर्नु परेको पो रहेछ :D
Lekhne tarika sarainai ramro lagyo
हा हा!! हासो को यथार्थ फाईदा राख्दै साह्रै चोटीला चुड्किलाहरुले निकै हसायो। सबै चुड्किलाहरु बेजोड रहेछन् हा हा
५ रूपैयाँको लागि फिगर बिगार्नु मुर्ख्याईँ हो रे ।
हा हा हा हा हा हा................
दाम्मी गयो दाम्मी!!
हांसो को फाइदा निकै धेरै रहेछन। नाम चलेकै भए पछी त झन सजिलो है किताब छाप्न?
त्यो भाले पनि निकै बुद्दीमानी रहेछ कोही फिगर बिगार्छ त जाबो ५ रुपाया को लागी? अण्डा त अण्डा , नेपालमा जतीमा पाइन्छ अमेरिकामा पनि करिब त्यही दाममा नै पाइन्छ अण्डा भने फछी अमेरीकामा पनि कुखाराले फिगर नबिगार्ने नपर्ने भयो।